सेतो बैठक कोठा फर्नीचर छान्नुहोस् र प्रकाश पाउनुहोस् सजाउनुहोस्
सेतो बैठक कोठा फर्नीचर छान्नुहोस् र प्रकाश पाउनुहोस्
मारिया vazquez | | लाउन्जहरू
यदि हामीले सेतो रंग प्रयोग गरीरहेका छौं भने luminosity लाभ हलवे र सानो भान्छामा र / वा थोरै प्राकृतिक प्रकाशको साथ, किन हामीले यसलाई बैठक कोठामा प्रयोग गरिरहनु हुँदैन? र होईन, यो रंगको फाइदा लिन कोठा सानो वा नराम्रो रूपमा उज्यालो पार्न आवश्यक छैन।
को सेतो बैठक कोठा फर्नीचर अन्तरिक्षमा प्रकाश प्रदान गर्नुको अतिरिक्त तिनीहरूले शुद्ध, स्वच्छ र ताजा वातावरण सिर्जना गर्न योगदान पुर्‍याउँछन्। केहि रहरूसँग सेताको अनुकूलता र बहुमुखी प्रतिभा छ। थप रूपमा, सेतो बस्ने कोठामा अन्य र color संयोजनहरू खेल्नको लागि राम्रो बेस हो। के तपाईं यसको सबै सम्भावनाहरू जान्न चाहनुहुन्छ?
जब हामी सेतोको बारेमा कुरा गर्छौं हामी यति धेरै कुरा गर्छौं टुक्रिएको जस्तो शुद्ध सेतो। पहिलेको प्रकाश र विशालताको भावना बढाउछ। पछिल्लोले लचिलोपन नगुमाईकन पहिलेको भन्दा ठाउँको लागि ठूलो न्यानोपन प्रदान गर्दछ। दुबै सामानहरू समान ठाउँमा मिल्दछन्, जुन पूर्व आधुनिक स्पेसमा र पछिल्लो परम्परागत अन्तरिक्षमा।
1 सेतो बैठक कोठा फर्नीचर
1.1 सेतो वर्कबेंच र फायरप्लेस
1.2 टेलिभिजनका लागि कम क्याबिनेटहरू
1.3 मार्बल सोफा र टेबल
2 रंगको संकेत
2.1 गोरा र तातो टोनहरू
2.2 सेतो, सुन र कालो
2.3 सेतो र निलो / हरियो
सेतो बैठक कोठा फर्नीचर
जब हामी सेतो बैठक कोठाको फर्नीचरको बारेमा कुरा गर्छौं, तब हामी के भन्दछौं? हामी टेलिभिजन फर्निचर, तर सोफा वा कफी टेबल जस्ता यस कोठामा अन्य आवश्यक चीजहरूमा पनि तपाईले सायद शंका गर्नुभए जस्तै हामी सन्दर्भ गर्दछौं। तपाईंले सोध्नु अघि, होइन, तिनीहरू सबै सेतो हुनुपर्दैन। जहाँसम्म, यो छनौट गर्न महत्त्वपूर्ण छ भने कस्तो किसिमको फर्निचर सेतो हाम्रो बैठक कोठा सजावट। किन? किनभने यस छनोटले ठूलो रूपमा तपाइँको शैली निर्धारण गर्दछ।
सेतो वर्कबेंच र फायरप्लेस
एक फायरप्लेस र सेतो फर्नीचर सजावटको लागि एक उत्तम कम्बो बनाउँछ क्लासिक शैली लाउन्जेस। तपाईं यो भित्ता कोठाको केन्द्र बिन्दु बनाउनु हुनेछ, बिन्दु जहाँ सबै आँखा निर्देशित हुनेछन्। र बाँकी फर्निचरहरू यस मोर्चाको साथ अनुरूप हुनुपर्दछ, यद्यपि तिनीहरू आवश्यक रूपमा उस्तै र color्ग हुदैनन् जुन हामी पछि हेर्नेछौं।
टेलिभिजनका लागि कम क्याबिनेटहरू
हामीले फर्काए जस्तो कम फर्निचर, बैठक कोठाको सजावटको चलन बनेको छ आधुनिक न्यूनतम शैली। उनीहरूसँग धेरै भण्डारण ठाउँ छैन, एउटा सुविधा जुन साना घरहरूमा समस्या बन्न सक्छ, तर यसको बदलामा तिनीहरू खुला र दृश्य प्रकाश स्थानहरू सिर्जना गर्न योगदान गर्दछन्। साइड लाइनहरू सफा लाइनहरू र नॉर्डिक प्रेरणाको साथ यी पूर्ण रूपमा पूरक हुन्छन्।
मार्बल सोफा र टेबल
सेतो सोफामा बस्ने कोठामा एकदम फरक शैलीहरू छन्, तपाईसँग हेर्नको लागि समय हुनेछ। जे होस्, जब यी संगमरमरको शीर्ष कफी टेबलको साथ जोडिन्छ, सम्पूर्ण हुन्छ सुरुचिपूर्ण र परिष्कृत क्लासिक मोडमा यदि सोफा चेस्टरफील्ड शैली हो र अधिक आधुनिक छ भने यो सफा लाइनहरू हो।
सेतोमा सेतोले अन्तरिक्षमा परिणाम दिन सक्छ अत्यधिक चिसो कसैको लागि। त्यसकारण सेतो बैठक कोठाको फर्नीचरलाई अरू साना फर्नीचर वा न्यानो टोनमा सामानको साथ जोड्नु सामान्य छ। यद्यपि ब्लुज र ग्रीन्स पनि राम्रो विकल्प हो जब यो बैठक कोठा सजावटको कुरा आउँछ।
गोरा र तातो टोनहरू
बैठक कोठा एउटा स्थान हो जुन परिवारलाई स्वागत गर्दछ र त्यसैले उनीहरूलाई स्वागत गर्नुपर्दछ। तसर्थ, यो ती कोठाहरूमा सामान्य हो जहाँ नायक गोत्रमा समावेश गरिएको हुन्छ फर्नीचर, सामान र कपडा त्यसले अन्तरिक्षमा न्यानोपन ल्याउँछ। कसरी?
को काठको फर्नीचर ती न्यानो र आरामदायी स्पर्श प्राप्त गर्न उनीहरू सबै भन्दा लोकप्रिय विकल्प हो। त्यसो गर्नका लागि अन्य ट्रेन्डिंग सामग्रीहरू छन् तरकारी फाइबर: विकर, रफिया, जूट ... यी सामग्रीहरूमा कालीनहरू, टोकरीहरू र बत्तीहरू सेतामा सजाइएको अन्तरिक्षमा एकीकृत गर्न धेरै सजिलो हुन्छ। हामी छालाको उल्लेख गर्न असफल गर्न सक्दैनौं, मुख्य रूपमा स्टूल वा कुर्सीको रूपमा यी खाली ठाउँहरूमा उपस्थित हुन्छन्।
सेतो, सुन र कालो
के तपाईंलाई संगमरमरका सोफाहरू र महीनाहरू सम्झना छ जुन हामीले सुरुमा सुन्दर र परिष्कृत कोठाहरू प्राप्त गर्न कुरा गरेका थियौं? ती कोठाहरूमा सामान्यतया समावेश हुन्छ सुनौलो विवरण प्रकाश तत्वहरू, ऐना वा खुट्टा फ्रेमहरू र सहायक टेबल फ्रेमहरू मार्फत। र साथै कालो; सानो र / वा कूलर लाईट गर्नुहोस् हामी स्पेस चाहन्छौं।
सेतो र निलो / हरियो
बैठक कोठामा सेतोसँग बिच्छेद गर्न ब्लुज र साग एक अर्को विकल्प हो। यी रंगहरू प्रदान गर्दछ प्रकाश र ताजगी र ती मध्ये ठूला खुराकहरू सम्पूर्ण ठाउँ बदल्न आवश्यक छैन। सेतो बस्ने कोठामा रंग थप्न एक किसिमका आर्मचेयरहरू, रग वा निलो किचेनहरू उत्तम विकल्प हुन्।
तपाईं बिरूवाहरू पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। कोठामा ती प्राकृतिक स्पर्श दिनुको साथै यसले हवालाई शुद्ध पार्न मद्दत गर्दछ। अरु के छ त, बोटबिरुवा संग तपाईं कोठामा र color्ग थप्नुहुनेछ र सजावटमा समन्वय दिन यस रंगमा तपाईंलाई केही थप सामानहरू मात्र थप गर्नुपर्नेछ।
के तपाइँ अब तपाइँको बस्ने कोठा सेतो मा सजावटको लागि बढी उत्साहित महसुस गर्नुहुन्छ? सेतो फर्नीचर छनौट र र colorको साना टचहरू थप्दै, त्यो कुञ्जी हो।
लेखको पूर्ण मार्ग: मुख्य पृष्ठ » स्पेसहरू » लाउन्जहरू » सेतो बैठक कोठा फर्नीचर छान्नुहोस् र प्रकाश पाउनुहोस्
क्लासिक भोजन कुर्सिहरु
ज्यामितीय आंकडा संग सजावट